चर्को नुन खाने बानी छ ? यो पढे तुरुन्तै तह लाग्नु हुन्छ – Jagaran Nepal
चर्को नुन खाने बानी छ ? यो पढे तुरुन्तै तह लाग्नु हुन्छ
अधिक मात्रामा नुनको सेवनले उच्च रक्तचाप मात्र होइन, आँखा, मृगौला, हड्डी तथा मस्तिष्कमा समेत नराम्रो असर पार्छ । यसले हड्डीलाई पातलो बनाउनुका साथै पेटको क्यान्सर निम्त्याउँछ ।
कतिले खाना माथि नुन छरेर खान्छन् । यो अझ खतरनाक हुन्छ । यसबाट बच्न सलाद तथा फलफुलमा कालो नुन वा वीरे नुनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । शरीरमा नुन अर्थात सोडियमको मात्रा बढी भए, नभएको थाहा पाउन निकै सजिलो छ । शरीरमा यी लक्षणहरु देखा परे नुनको प्रयोग तुरुन्तै कम गर्न सकिन्छ ।